Tattoo Valknut ama dhimashada gunti: macnaha iyo naqshadaha | Tattoo
Tattoos lugta ah
Tattoos leh qaabab
Tattoos leh xarfo
Tattoos Xayawaan ah
Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
Tattoo Valknut ama guntin geeri, waa maxay macnaheedu?
Fernando Prada | | Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos'
Weligaa ma soo martay mid ka mid ah saddexda xagal ay isku xidhan yihiin? Waa run in ay tahay naqshad si caddaalad ah loo wada leeyahay in kasta oo waxa aan dad badani ogayn ay tahay macnaha dhabta ah iyo / ama astaanta. Waa astaan ​​leh xambaarsan macne culus.
Magacaaga? Valknut, in kasta oo sidoo kale loo yaqaan «gunti gunti» Maqaalkani wuxuu u heellan yahay astaamaha valknut iyo macnahooda.
1 Macnaha Valknut
2 Sawirada Tattoos Valknut
Inkastoo aan wax yar ka bilowno taariikhdiisa. Waa maxay macnaha magaca valknut ama xaggee ka yimid? Hagaag, asalkiisa magaciisa dhabta ah lama yaqaan sababtuna waa qarniyadii hore laakiin magaca hadda wuxuu ka yimid midowga ereyada "Valk" oo macnihiisu qiyaas yahay "Askarigii Falkii Ku Dhacay » iyo «Knut» oo macnaheedu yahay «gunti«. Sidaa darteed, midowga ereyadan ayaa abuuraya "guntinta geerida", waan ku celinnaa, waa macne qiyaas ah.
Valknut Waxay sidoo kale la xiriirtaa «Aabbaha Dadka oo dhan » taas oo ah sida Odin loogu yaqaanno khuraafaadka iyo dhaqanka Norse. Isaga oo matalaya saddex gees oo isku -xidhan, “guntinta dhimashada” waxay la xiriirtaa dhimashada iyo dhammaadka iyo bilowga wax walba. Aragtiyo kale waxay sheeganayaan in valknut ay ka dhigan tahay is -dhexgalka sagaalka boqortooyo ee ka kooban khuraafaadka Norse sida soo socota:
Saddexagalka koowaad mideeya boqortooyooyinka Asgard, Vanaheim iyo Jötunheim.
Saddex -xagalka labaad mideeya boqortooyooyinka Alfheim, Svartálfaheim iyo Midgar.
Saddex -xagalka saddexaad mideeya boqortooyooyinka Mulpelheim, Niflheim, Helheim.
Dhanka kale, sida ka muuqata astaanta, boqortooyooyinkaan waa kuwo isku xiran, oo muujinaya midowga ka dhexeeya iyaga oo samaynaya todo si wada jir ah iyo awood u leh inay u safraan iyaga dhex mara Bifröst.
Dhaqanka Viking, waxaa la yiri valknut waxaa lagu xardhay ama lagu xardhay dharkooda iyo hubkooda rag iyo dumar diyaar u ahaa inay ku dhintaan magaca Odin; Sidaad arki karto, waa astaan ​​aad ugu dhow ilaahkan.
Aqoonyahanno kale iyo aqoonyahanno ku xeeldheer khuraafaadka Norse waxay la xiriiraan valknut -ka weyn Hrungir tan iyo tan dambe lahaa wadne saddex gees leh waxaana looga adkaaday dagaalka Thor markii uu ku dhuftay caankiisii Mjölner dubbe. Guud ahaan, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in macnaha astaanta ay wali tahay wax, waqtigan xaadirka ah, u furan doodda laakiin waxa aan ku heshiinno waxay la xiriirtaa Odin iyo qeyb weyn oo ka mid ah sheekooyinkiisa.
ka Tattoo valknut Waxay ku habboon yihiin kuwa raadinaya tattoo ku xeeran halyeeyada iyo sheekooyinka khuraafaadka ah. Qaab -dhismeedkiisa joometeriga ayaa aad u caan baxay maalmahan iyo in kasta oo dadka qaar si khalad ah ugu xiraan fikradaha xagjirnimada qaarkood, runtu waxay tahay in taariikhda valknut ay tahay kun sano.
Hada, Astaanta Norse Waxaa loo adeegsadaa oo kaliya qayb ka mid ah dhaqanka Viking iyo taariikhda laakiin, bulshada galbeedka ee Qarnigii XXI waa mid aad u baahsan. Laga soo bilaabo Kooxaha muusiga (bir culus, bir ...) ilaa xisbiyada siyaasadeed fikradaha kala duwan iyo xitaa adduunka shineemada iyo majaajilada, astaamaha Viking iyo khuraafaadka ayaa xoogaynayay sannadihii la soo dhaafay si ay u noqdaan shey maalin walba ah maalinteenna maalin.
El valknut waa astaan ​​viking ah kuwaas oo saddex xagal leh ay isku xiran yihiin. Tattoo Tani waxay xididdo qoto dheer ku leedahay khuraafaadka Norse. Runtu waxay tahay in sidaasi tahay qarniyadii hore oo xitaa cilmi baarayaasha iyo khubarada dhaqanka Viking -ku aysan isku raacin macnaheeda iyo shaqadii asalka ahayd ee valknut. Maadaama ay jiraan saddex xagal, qodobka tirada waa in la tixgeliyaa.
ka Tattoo valknut waxaa loo adeegsadaa in lagu calaamadeeyo adduunyo iyo jihooyin cusub, inkasta oo sidoo kale loo isticmaali karo in lagu matalo mustaqbalka, koritaanka shaqsiyeed iyo raadinta quudhsiga.
Maanta calaamaddan ayaa sidoo kale loo isticmaalaa muujiyaan xukun jaahilka. In kasta oo ay ugu badan tahay in la helo kaliya saddexda xagalka ee ka kooban valknut, haddana waxaa jira kuwa doorta inay raacaan astaamo kale oo la xiriira dhaqankaas, sida buuq, xayawaan sidoo kale la xiriira Odin.
Guud ahaan, naqshadda valknut waxay u oggolaaneysaa kala duwanaansho badan iyada oo aan lumin macnaheeda. Laga soo bilaabo midab saar, ilaa laga sawirayo saamaynta dhagax ku xardhan ama si aad ah ugu yar (khadadka kaliya ee bixiya fikradda naqshadda), macnaheeda ama nuxurkiisa lama beddelin, taasoo u oggolaanaysa qof kasta oo ku xardhan maqaarkooda, inuu siiyo taabashadiisa gaarka ah iyo tan gaarka ah.
Marka la soo koobo, khuraafaadka Norse wuxuu leeyahay runes iyo astaamo aad u kala duwan oo noo soo gudbiya taariikhdeeda iyo halyeeygeeda kuwaas oo leh macno aad u qoto dheer oo xoog leh, oo ka yimid farshaxan -yahannada tattoo, waxaan kugu dhiirrigelinaynaa inaad baarto dhaqankan hodanka ah iyo astaamaheeda oo aad u badan maqashay.
Galbeedka la socda maqaalkan waxaad ka heli kartaa mid ururinta kala duwan ee tattoos of Valknut in fikradaha la qaato.
Sawirada Tattoos Valknut
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Waxyaabaha iyo waxyaabaha loo yaqaan 'tattoos' » Tattoo Valknut ama guntin geeri, waa maxay macnaheedu?
Tattoo kale oo la xiriira
Tattoo Flamingo iyo macnahooda
Tattoo oo lagu durayo hargab, suurta gal ma tahay mise qatar baan gali doonaa?
Ku hel fikradaha tattoo ugu dambeeyay e-maylkaaga.